Pak Mun Dam ee Waqooyi Bari Thailand
Qeybta:Sheekada Saameynta3 min akhris
Nidaamka Cusub ee Dib Looga Dhisi karo
Reediyeyaasha Caalamiga ah
Bishii Janaayo 2018, koox ka kooban 20 xubnood oo bulshada rayidka ah ayaa isugu soo ururay Nonthaburi, Thailand si loogu tababaro Qorshaha Soodhawaynta Qorshaha Siyaasadeed ee Mekong / Myanmar.
Iyada oo taageero ka heleysa Xarunta McKnight Foundation, iyo sidoo kale Oxfam iyo EarthRights International, Rivers International waxay isu keentay dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo kuwa xuquuqda aadanaha, suxufiyiinta, qareennada, barayaasha, iyo la-taliyeyaasha siyaasadeed ee ka yimaada Shiinaha, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, iyo Vietnam. Ka qaybgalayaashu waxay ku qaatay saddex cisho oo sahaminta suurtagalnimada dib-u-cusbooneysiinta si ay u daboolaan baahida tamarta gobolka.
Qorshayaasha tamarta mustaqbalka ee gobolka ayaa si xooggan ugu tiirsan dhuxusha iyo tamarta. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, kharashka bani'aadamka iyo deegaanka ee tiknoolajiyadan waa mid aad u sarreeya. Witoon Permpongsacharoen, Agaasimaha Isku-xidhka Mekong Energy iyo Ecology, ayaa muujiyay khatarta isagoo sharraxaya saameynta ay ku leeyihiin Pak Mun Dam dhamaystiran ee bulshooyinka degaanka.
"1,700 oo qoys ayaa si qasab ah loogu rarey guryahooda iyaga oo ku yaala Mun River, halkaas oo ay ku daaleen oo ay u beerteen jiil," ayuu u sheegay kaqeybgalayaasha. "116 noocyada kaluunka, ama 44% noocyada kalluunka ee laga helay Mun River, ayaa la waayay. Soosaarka kalluumeeysiga ayaa hoos u dhacay 80%, taasoo keentay in la waayay hab nololeed qiyaastii 6,200 qoys. "
Ka qaybgalayaasha lix dal oo Mekong ah oo ka socda tababarka tababbarka siyaasadda tamarta
Natiijada? "Pak Mun Dam ee Waqooyi Bari Thailand waxay soo saartaa tamar ku filan si ay u iftiimiso hal xarun ganacsi-Siam Paragon-magaalada hoose ee Bangkok."
Warka fiicani waa in isbedelka tamarta uu is bedelo. Qiimaha degdega ah ee hoos u dhacaya ayaa hadda dhigaya qorraxda ku dhow dhererka qiimaha korontada, iyada oo aan wax saameyn ah u leh deegaanka ama bulshada. Iyadoo ay jirto isbedeladaas, si kastaba ha ahaatee, tamarta la cusbooneysiin karo iyo tamarta tamarta ayaa wali ka ciyaara doorka yaryar ee qorshayaasha tamarta ee gobolka Mekong.
Kusaabsan tababarkan, dhaqdhaqaaqayaasha maxalliga ahi waxay rajaynayaan in ay taas bedelaan. Laakiin waxay u baahan yihiin taageero si loo taaban karo dib-u-cusbooneysiinta iyo wax-ku-oolnimada sida qorshooyinka ganacsiga tamarta gobolka ee horumarinaya. Tababarkan ayaa caawiyey. "Waxaan helay qaybta ugu waxtarka badan ee tababarka ahayd in la barto si xooggan u falanqeeya qorshayaasha tamarta qaranka iyo soo jeedinta ganacsiga tamarta gobolka iyo in lagu dhiirrigeliyo qorshe tamareed oo dimoqraadi ah," ayuu yiri qof ka socda Myanmar.
"Qiimaha degdega ah ee hoos u dhaca ayaa hadda dhigaya qorraxda ku dhow qiimaha korontada, iyada oo aan wax saameyn ah u leh deegaanka ama bulshada."
Kuwa ka shaqeynaya qorshaynta tamarta qaranka, falanqaynta siyaasadda, iyo dadaallada tamarta bulshada ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaya si fudud oo loo xiri karo xidhiidhada. Ka qaybgalayaasha ka soo jeeda Thailand, iyo Vietnam, tusaale ahaan, waxay la wadaagaan fikradaha waxtarka leh ee ay la leeyihiin dhaqdhaqaaqa ka yimid Myanmar iyo Cambodia, waddamada marxaladaha hore ee qorshaynta tamarta.
"Sannadkan waxaan diirada saarayaa maaliyadda tamarta," ayuu yiri ka qaybgalaha Green ID, oo ah koox u doodista deegaanka oo ku salaysan Hanoi, Vietnam. "Waxaan rajeynayaa in aan si dhow ula shaqeyno jaaliyado kale oo ka socda wadamada kale ee Koofur-bari Asia si kor loogu qaado xalalka kale ee tamarta iyo in la keeno codadka maxalliga ah heerarka heer qaran iyo heer gobol."
Xarunta cagaaran ee Jaamacadda Thammasat Rangsit ee Bangkok.
Tababarku wuxuu ku dhammaaday booqasho uu ku tagay xerada Thammasat University Rangsit ee magaalada Bangkok, halkaas oo Ku-xigeenka Rector Dr. Prinya Thaewanarumitkul uu la wadaagay himiladiisa si uu u rogo xerada "magaaloo caqli ah" iyada oo la shaqeyneysa ardayda si loo yareeyo qashinka una kordhiyo tayada tamarta, korontada gebi ahaanba tamarta qoraxda.
"Waxaan dareemayaa farxad weyn in la maqlo in ay jiraan dad aad uwanaagsan sida hoggaanka Jaamicadda Thammasat oo wada shaqeynaya si loo yareeyo saameynta CO2 dhulka meeraha iyo ka dhigo meel cagaaran, "ka qaybgalayaasha Cambodia waxay ka muuqdaan tababarka kaddib. "Sida Dr. Prinya uu sheegay, waxay qabteen qaybtoodii, waxanu nagu xiran yahay inaan tallaabo qaadno. Isbedeladaasi kuma bilaabmayso cid kale, laakiin annaga ayaa nala ah. "